Ungayinxiba njani iMask
Oku kulandelayo linyathelo elichanekileyo lokunxiba imaski: 1.Vula imaski kwaye ugcine ikliphu yempumlo phezulu emva koko tsala intambo yendlebe ngezandla ezibini. 2. Bamba umlomo-ungcolise isilevu sakho ukugquma impumlo nomlomo wakho. 3.Tsala ilokhwe-yendlebe emva kweendlebe zakho kwaye uzilungelelanise ukuze uzive ucocekile ...
Ukuthunyelwa ngaphandle kweemveliso ezithintela ubhubhane
Ukusukela ekubeni i-convid-19 isasazeka ngokukhawuleza phesheya, iiodolo zokulwa intsholongwane ezivela kumazwe ahlukeneyo ziye zaqhuma. Ngokwezibalo zethu zezemali, ukusukela ukuphela kukaFebruwari kulo nyaka, ukuthunyelwa kwamanye amazwe ubuninzi beemveliso zokuthintela ubhubhane kunyuke kakhulu. Kude kube sekupheleni kukaJulayi, sithumela ngaphandle ivelufa iyonke yase-US ...
Imisebenzi eQulunqelweyo yoNyaka yokwakha amaqela
Kutshanje, inkampani yorhwebo ye-Yiwu Sandro ibibambe inkomfa yonyaka ka-2020 yokuhlalutya ngokubanzi ukukhula komsebenzi kwisiqingatha sokuqala salo nyaka, kwaye igxininise ukugxila komsebenzi kwisiqingatha sesibini sonyaka we-2020. . Bonke abasebenzi atte ...
Oku kulandelayo linyathelo elichanekileyo lokunxiba imaski: 1.Vula imaski kwaye ugcine ikliphu yempumlo phezulu emva koko tsala iluphu yendlebe ngezandla zakho. 2.Bamba imaski ngokuchasene nesilevu sakho ukugquma impumlo nomlomo wakho 3.Tsala ilokhwe-yendlebe emva kweendlebe zakho kwaye uzilungelelanise ukuze uzive ukhululekile. ...
Ukusukela ekubeni i-convid-19 isasazeka ngokukhawuleza phesheya, iiodolo zeemveliso zokuthintela ubhubhane ezivela kumazwe ahlukeneyo ziye zaqhuma. Ngokwezibalo zethu zezemali, ukusukela ukuphela kukaFebruwari kulo nyaka, ukuthunyelwa kwamanye amazwe ubuninzi beemveliso zokuthintela ubhubhane kunyuke kakhulu. Kude kube sekupheleni kukaJulayi, sithumela ngaphandle ...
Kutshanje, inkampani yorhwebo ye-Yiwu Sandro ibibambe inkomfa ye-2020 phakathi enyakeni ukuze ihlalutye ngokupheleleyo ukukhula komsebenzi kwisiqingatha sokuqala se-2020, kwaye igxininise ukugxila komsebenzi kwisiqingatha sesibini se-2020. Bonke abasebenzi bazimase ...
Isigqumathelo somqhaphu, Imaski yoqhaqho, Ubuso beMask, Imaski, Imaski yobuso beKn95, Imaski yelaphu,